Realme GT Neo2, ike ọzọ dị n'etiti etiti | Akụkọ Ngwa
Anyị na-ewetara gị ọzọ ngwaahịa sitere na ika kwesịrị ntụkwasị obi maka ọnụ ahịa ego nke bịarutere Spain na nso nso a iji guzoro megide eze nwanyị ọnụ ala Xiaomi. Anyị na-ekwu dị ka ọ na-enweghị ike ịbụ ma ọ bụghị banyere Relame, ụlọ ọrụ na-ejigide katalọgụ mmalite nke jupụtara na akụkọ n'agbanyeghị nsogbu dị ugbu a nke semiconductor na ngwaahịa ndị ọzọ.
Anyị na-ewetara Realme GT Neo2 ọhụrụ, mwepụta ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ anyị nyochara nke ọma wee nwalee ka ị hụ ma ọ ga-aka akara n'ezie tupu na mgbe n'etiti etiti.
1 Nhazi na ihe: Otu n'ime lime na otu nke ájá
3 Multimedia na njikọ
4 Ngalaba foto, nnukwu ndakpọ olileanya
Nhazi na ihe: Otu n'ime lime na otu nke ájá
N'akụkụ a, ka anyị kwuo na Realme na-aga n'ihu n'ụzọ ya eguzobelarị, GT Neo2 zọọ n'azụ yiri nke ndị gara aga n'agbanyeghị na ọ na-enye echiche nke ịbụ iko n'oge a, nke na-adịghị eduga na ikuku chaja, tumadi n'ihi na akụkụ nke ngwaọrụ bụ plastic dị ka a na-emekarị maka ika ruo ugbu a. Na n'ihu ebe anyị nwere ọhụrụ 6,6-inch panel na nnọọ warara n'ọnụ, ma anya site na ihe ndị ọzọ ngwaahịa ranges na-enye, karịsịa na-eburu n'uche na asymmetry n'etiti elu na ala.
Agba: Acha anụnụ anụnụ na-egbuke egbuke, GT akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na oji.
Ugbu a dị ọnụ ala karịa, USB-C na-atụgharị na ala, na-enweghị Jack 3,5mm n'oge a, ebe anyị nwere bọtịnụ "ike" n'akụkụ aka nri yana bọtịnụ olu n'aka ekpe. Ihe a niile na-enye anyị nha nke 162,9 x 75,8 x 8,6 mm na nha zuru oke ga-emetụ gram 200, Ọ bụghị ìhè na-atụle na ọ bụ plastik, anyị na-eche na nha batrị ga-enwe ọtụtụ ihe jikọrọ ya na nke a. Ma ọ bụghị ya, ngwaọrụ emechara nke ọma na palette agba na-adọrọ mmasị.
Anyị na-amalite site na isi ihe ọkacha mmasị Realme, eziokwu nke ịkụ nzọ na Qualcomm Snapdragon 870 Ọ na-enye ezigbo akara na ịkwesighi ịgbanye ike, iji chịkwaa ya anyị nwere sistemu ịgbasa ọkụ nke Realme nke ọtụtụ ụdị ngwaọrụ egosipụtalarị uru ya. Na graphic larịị, ọ na-esonyere ya Adreno 650 nke ikike a ma ama, nakwa 8 ma ọ bụ 12 GB nke LPDDR5 Ram dabere na ngwaọrụ anyị kpebiri ịzụta. Ihe nlele ule maka nyocha a bụ 8GB nke RAM.
Batrị enyela anyị ihe karịrị otu ụbọchị zuru oke.
Anyị nwere nhọrọ nchekwa abụọ, 128 GB na 256 GB n'otu n'otu na teknụzụ UFS 3.1 nke arụmọrụ ya karịrị egosipụtara dị ka ihe nchekwa nchekwa kacha mma maka ngwaọrụ gam akporo. Ruo ugbu a ihe niile dị mma dịka ị nwere ike ịlele, anyị nwere ebe nchekwa dị mma, ngwaike dị ike na ọtụtụ nkwa, anyị ga-ahụ nke n'ime ha mezuru na nke na-emezughị. Nke bụ eziokwu bụ na ngwaọrụ ahụ na-eji obere ihe niile anyị na-etinye n'ihu ya, ọ na-ebuli nhazi nkeonwe, Realme UI 2.0 na-aga n'ihu ịdọrọ ọtụtụ bloatware nke anyị na-aghọtachaghị na ngwaọrụ nwere njirimara ndị a, Otú ọ dị, anyị nwere ike iwepụ ya n'ụzọ dị mfe.
Multimedia na njikọ
Ihuenyo AMOLED 6,6 inch pụtara, anyị nwere mkpebi FullHD na ọnụego ume ọhụrụ nke na-erughị 120 Hz (600 Hz n'ihe gbasara mmetụ aka). Nke a na-enye anyị n'ụdị 20: 9 ezigbo nchapụta (ihe ruru 1.300 nits na oke kachasị) yana ezigbo mgbanwe agba. Obi abụọ adịghị ya, ihuenyo ahụ dị m ka ọ bụ isi ihe nke Realme GT Neo2 a. O doro anya na anyị nwere ndakọrịta na HDR10 +, Dolby Vision na n'ikpeazụ Dolby Atmos site na ndị na-ekwu okwu "stereo" ya, anyị na-etinye akara nkwuputa n'ihi na nke dị ala nwere ikike ka ukwuu karịa nke dị n'ihu.
Banyere njikọta, ọ bụ ezie na anyị na-ekwu nke ọma na Jack 3,5 mm, Ihe ngosi nke ika (ikekwe ihe kpatara ha ji tinye ụfọdụ Buds Air 2 na mkpọ akwụkwọ akụkọ). O doro anya na anyị nwere njikọ DualSIM maka data mkpanaka, nke na-erute oke ọsọ 5G dị ka a na-atụ anya, niile na-esonyere Bluetooth 5.2 na nke kachasị mkpa, anyị na-enwekwa mmasị WiFi 6 nke na ule m enyela ọsọ ọsọ dị elu, nnukwu arụmọrụ na nkwụsi ike. N'ikpeazụ soro GPS na NFC kedu ka ọ ga-esi dị iche.
Ngalaba foto, nnukwu ndakpọ olileanya
Igwefoto Realme ka dị anya na asọmpi ahụ, ebe ha na-etinye sensọ na-eṅomi ịbụ nnukwu (nke nwere okpokolo agba agba agba), ha tere aka na ọmarịcha arụmọrụ nke ngwanrọ n'ozuzu ya. Nke a bụ mgbe ị na-echeta na ị na-eche ihu n'etiti ngwaọrụ. Anyị nwere isi ihe mmetụta nke na-agbachitere nke ọma na ọnọdụ ọkụ dị mma, na-ata ahụhụ dị iche iche, ma na-eme ka vidiyo ahụ guzosie ike. The Wide Angle nwere ihe isi ike a na-ahụ anya na obere ọkụ yana yana ọdịiche dị iche iche nke ọkụ, Macro bụ ihe mgbakwunye na-enye ihe ọ bụla na ahụmahụ ahụ.
Isi: 64MP f / 1.8
Ogologo akụkụ: 8MP f / 2.3 119º FOV
Nnukwu: 2MP f / 2.4
Anyị nwere igwefoto Selfie 16 MP (f / 2.5) nke nwere ọnọdụ ịma mma intrusive mana nke ahụ, n'adịghị ka nke azụ, na-enye nsonaazụ dị mma n'ime ihe a na-atụ anya ya. Ụdị ihe osise ahụ, ihe ọ bụla igwefoto eji, nwere sọftụwia na-akpaghasị oke ókè ma nwee ike ịseta obere ọkụ karịa ka a tụrụ anya ya, yabụ na akwadoghị iji ya. Ọ na-achọsi ike na ihe kachasị dị ịrịba ama bụ vidiyo nwere usoro ọgụgụ isi Artificial maka nkwụsi ike, ihe m chọpụtara na ọ bụ nke kachasị mma.
Ọ bụrụhaala na ngalaba foto adịghị mkpa maka gị (na nke a, m na-akpọ gị òkù ka ị bịa na njedebe dị elu) Realme GT Neo2 a na-enye ezigbo arụmọrụ ekele maka panel AMOLED ya nwere ọnụ ọgụgụ ume ọhụrụ dị elu, UFS 3.1 ebe nchekwa na ihe nhazi a ghọtara. , na Snapdragon 870. N'ime akụkụ ndị ọzọ ọ naghị apụta, ma ọ bụ na-eme ka a ga-asị, maka ihe ọ bụ ọnụ na-amalite site na ọnụ ahịa ndị a:
Onyinye Fraịde Oji (site na Nọvemba 16 ruo Nọvemba 29, 2021): € 369,99 (8GB + 128GB) € 449,99 (12GB + 256GB).
Ọ dị na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị realme yana ndị nkesa gọọmentị dị ka Amazon, Aliexpress ma ọ bụ PcComponentes n'etiti ndị ọzọ.
Ihe na: November 16 nke 2021
Ike dị ukwuu na ebe nchekwa dị mma
Ọnụ ego edoziziri na enye
Ezigbo ihuenyo na ntọala wee nweta ume
okpokolo agba akpọpụtara nke ukwuu
Ha na-aga n'ihu ịkụ nzọ na rọba
Ụda anaghị enwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Realme GT Neo2, ike ọzọ dị n'etiti etiti
Samsung QLED 4K 2021 TV nwere mbelata 32% (ị na-echekwa € 276)